I-Android / i-Chrome OS hybrid OS ihlolwe ku-Nexus 9 kuya ku-Andromeda | Izindaba zamagajethi
U-Okthoba 4 ngeke abaluleke kuphela ku-Google ekwethulweni kwayo yonke leyo mikhiqizo, njengePixel, iGoogle Home, isibukeli seDayDream neChromecast 4K, kepha isoftware nayo izoba nenani elikhulu lokuthi kuzosho ukuthini iGoogle Assistant nokuthi kungenzeka yini ukuthi thina abakhona ngaphambi kuka-Andromeda, yena IHybrid Android / Chrome OS.
Manje sesiyazi ukuthi uhlelo lwakho lwe-Android / Chrome OS hybrid yokusebenza belulokhu lukhona ngaphakathi ibizwa nge- "Andromeda" futhi lokho kuvivinywa kudivayisi ye-Nexus 9. Yebo, leyo thebhulethi eyadlula ngaphandle kokunakwa okuningi futhi yathuthukiswa yi-HTC 2 eminyakeni edlule. Ngalesi sikhathi kukhona ubufakazi obucacile bokuthi i-Andromeda ingavela ngo-Okthoba 4.
I-Google izovivinya i-OS yayo ye-hybrid eseduze ku-Nexus 9 eyenziwe yi-HTC. Ubufakazi buvela kokutholakele ku-AOSP ye-Android 7.0 Nougat. Elokuqala kwakuyifayela elithi "SurfaceCompositionTest.jave", elimele uchungechunge lwezivivinyo ezisezingeni eliphansi ukukala ukusebenza kwehluzo. Lokhu kuhlolwa kuyakwenza ireferensi eqonde ngqo ku-Andromeda ezikhathini eziningi, kufaka phakathi ukuthi i-Andromeda idinga amaphuzu aphezulu wokusebenza.
Ngokwaleli thuluzi, i- amaphuzu amancane adingekayo ukusebenzisa i-Andromeda kungu-8.0. Ngokuqhathanisa, i-Android idinga kuphela i-4.0 futhi i-Nexus 9 ikwazile ukuthola amaphuzu asondele ku-8.8.
Manje imfihlakalo isesizathu sokuthi kungani iGoogle ihlole i-hybrid ye-Android / Chrome OS yayo kuleyo tablet. Ngokwaziwa, i-Andromeda igxile ekutholeni i-Android engcono eyenzelwe yona amadivayisi afana nokuphatheka, njengalezo ezi-2 kwezingu-1 futhi mhlawumbe namaphilisi. Enye inothi etholakale ku-AOSP isho isici sokuphathwa kwamawindi samahhala esivele unyaka wonke ku-Android Nougat.
Yi- «SurfaceCompositionMeasuringActivity.java» ebalula ukuthi ithola amadivayisi we-Android ngokuba nesici se- ukuphathwa kwamahhala kwamawindi. Kusuka kulokho okubonakala sengathi, konke kugxile kwesinye isinyathelo ku-Android.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-Google ihlola i-Andromeda, i-Android / Chrome OS yayo ehlanganisiwe, ku-Nexus 9
Imoto ezimele yakwaGoogle isengozini enkulu, kepha ayilona iphutha